Leicester - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Leicester
Leicester ayaa ku jirta kaalinta seddexaad ee dhanka kala sarreynta gooldhalinta waxayna umuuqataa kooxda ugu fiican England oo aan loogu yeerin Man City ama Liverpool. Naomi Baker / Sawirrada Getty
Intii lagu gudajiray Xilliga mucjisada 2015-16, markii Leicester ay iska caabisay caqli gal kasta iyo 5 000 si fursadaha 1 ee loo caleemo saaro Horyaalka Premier League, sheekadiisa waxaa ku jiray astaan. Xaqiijinta, oo dunida dacaladeeda uga dhigtay mowduucdeeda "Wax walba waa suuragal", shaki la'aan waxa ay ahayd mid gaar ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale lagu calaamadeeyay sumcadda naadiyada waaweyn: Leicester aad ayuu u fiicnaa, laakiin awoodaha dhaqameedku aad bay u liitay.
Arsenal, waxay ku dhowdahay dhamaadka waqtigiisii ​​xukunka Arsene Wenger, waxay ku dhameysteen dhibcaha 10 iyagoo gadaal ka soo galay kaalinta labaad ka dib guuldaradii Tottenham. labadoodii kulan ee ugu dambeysay oo loo yaqaan 7-2 inay ku turunturoodaan kaalinta saddexaad. Manchester City ayaa isku diyaarineysay soo bandhigida Pep Guardiola si ay ugu bedelato Manuel Pellegrini, iyadoo kooxda ay ku dhawaaqday bedelka afar bilood ka hor dhamaadka ololahan, kooxda xiisaha badan ayaa u jiheystay dhamaadka ciyaarta.
Manchester United, oo caajisiisiisa iyo u qalmitaanka u haysa Louis van Gaal ayaa lumisay booskii Champions League ee ay ka hortageen deriskooda. Jurgen Klopp ayaa u dhaqaaqay kubada cagta Ingariiska isaga oo la joogaya Liverpool, isagoo kaalinta 8aad u soo saaray finalkii Europa League, halka Chelsea ay ceyrisay Jose Mourinho bishii Diseembar, markaas oo kooxdiisu ay aheyd koox lix iyo toban ah.
1 Ku saabsan
Iyaga oo leh dhammaantood. Isagoo ku dhegan dagaalka ka dhanka ah dhaqan-celinta, Leicester wuxuu ku tiriyay mid ka mid ah waxyaabaha naxdinta leh ee ugu weyn ciyaaraha. Hadda, si kastaba ha noqotee, marka loo eego kooxaha ugu naxariis darada ah ee Liverpool iyo Man City, naadiga East Midlands wuxuu u dhaqmaa si ka duwan sidii hore. Waa unug aad uga fiican kuwii guuleystey hanashada horyaalnimada: waxay leeyihiin koox isku dheelitiran, qaar ka mid ah da’yarta ugu xiisaha badan uguna joogtada badan horyaalka, awood ay ku ciyaaraan nidaamyo kala duwan iyo istiraatiijiyad caalami ah. si kor loogu qaado awoodooda.
Maaha mucjiso ama dhacdo kadhacday inay kaalinta saddexaad ka hoos galaan Brendan Rodgers, waana rikoorka daafaca ugu fiican ee wadajira - in kasta oo la iibiyey Harry Maguire oo loogu talagalay Man United oo loogu talagalay 80 milyan oo ginni - iyo tirada labaad ee goolasha ugu sarreysa ee laga dhaliyay gadaasheeda City. Leicester sidoo kale waa ay ka tayo badan yihiin metrik kasta xilligan xilligan lagu jiro xilligii Xilliga 2015-16. (Kadib: 11 wuu ciyaaray, 23, 19 waa laga dhaliyay, farqiga goolasha 4, qodobbada 22.) Hadda: 11 ciyaaray, 27, 8 ayaa laga dhaliyay, 19, 23, farqiga goolasha.
Sabtida, Leicester, kooxda martida loo ahaa, ee Arsenal - kooxda Unai Emery kuma aysan guuleysan horyaal seddex kulan ah - kulan hakin kara xaaladdooda sida ugu fiican ee ka danbeeya Liverpool iyo Man City.
Nin wanaagsan, waqti wanaagsan, qalab wanaagsan
Markay ahayd Oktoobar 2018, way cadahay in Claude Puel iyo Leicester ay gaadhayaan dhamaadka noloshooda: agaasimihii hore ee Monaco, Southampton iyo Lille waxay lumiyeen sanduuqa, agaasimaha kubada cagta barafoobay, Jon Rudkin, iyo si sax ah ugama aysan hadlin shaqaalaha ama ciyaartoyga.
Musharraxa ugu wanaagsan ee Leicester wuxuu ahaa Rodgers, kaasoo ku mashquulsan ku haynta guushii Celtic ee seddexaad oo toos ah. xaalad deg deg ah. Waxay wax ka weydiiyeen xiisihiisa xilli hore, laakiin wuxuu doonayay inuu ololaha ku dhammeeyo gudaha Scotland. Bishii Febraayo, si kastaba ha noqotee, ma jirin wax rajo ah oo laga qabtay: Booska Puel wuxuu noqday mid aan la dafiri karin oo waa la ceyriyay ka dib markii todobo guuldarro ay ka soo gaartay sagaal kulan.
Leicester gacmahiisa ayaa wasakhaysan, isaga oo ku bixiyaya 7,5 milyan ginni Rodgers, isaga oo ka xoreeyay qandaraaskiisa. Celtic. Waxay u baahdeen tababare horumarsan Horyaalka Premier League, xirfad u leh horumarinta ciyaartoy da 'yarta ah, dabeecad adag oo soo jiidasho leh, iyo rabitaan gubasho si ay ula tartamaan ciyaartoy dhaqameedka waaweyn. Rodgers wuxuu si fiican uga jawaab celiyay dhammaan rajooyinka laga qabo, in kasta oo khabiiro badan ay su’aal geliyeen haddii kooxda ka ciyaarta Scottish bartamihii xilli ciyaareedka inay awood u yeelan karto inay maamusho koox Ingiriis ah oo dhexdhexaadin ah, laga yaabo inay iska indhatiraan sawirka weyn.
Leicester waxay lahayd dhammaan aaladaha lagu guuleysto laakiin waxay ubaahantahay hogaamiyaha saxda ah. Rodgers wuxuu ahaa ninkan - soo jiidashadiisa Liverpool waxaa loo xukumay cadaalad daro aad u daran - waqtiga saxda ah ee mustaqbalkiisa ciyaareed iyo saldhiggii saxda ahaa inuu ka tago.
Rodgers wuxuu ku biiray Leicester bishii Febraayo 2019 wuxuuna ku daray xoog iyo dhiirigelin hibadooda. kooxda. Sawirada Plumb / Leicester City FC oo loo maro Getty Images
"Waxa ay ii ahayd fursad dhaqso u soo baxday waxaanan go aansaday in aan dhaqso u dhaqano," ayuu yidhi balanta kadib. Ka saar shucuurta oo ahayd furaha. Fursadda inaad ku timaado naadi sida Leicester aniga iima aysan sugin. Xaqiiqdii anigu isma badalin guulihii aan ka gaadhay isku imaatinka. Waa koox leh taariikh qani ah, taariikhdeedii ugu dambeysayna waxay aheyd guul, sida aan wada aragnay. Way adkeyd, laakiin waxaan ka dhigtay mustaqbal mustaqbal. "
Illaa iyo hadda, wuxuu ku dhashay mas'uuliyadda kulanka iyo inuu dhaafo waxyaabaha ka reeban naadiga.  "Isbedelku wuxuu ahaa mid aad u weyn, ha ahaato duruufaha maxalliga ah, falcelinta ciyaartoygu, ama heerarka garoonka," ayuu yiri xubin ka mid ah shaqaalaha.
Qof baa yidhi waxay la mid tahay sidii aannu mugdi ku turunturoonnay, haddana nalalka ayaa jira oo wax walba way cad yihiin. "
Qaab dhismeed adag
Guddiga kooxda ayaa aaminsan in karti xumada Unai Emery ay u leedahay dayactirka "xun" daafaca Arsenal ay ku qasbi karto shaqadiisa.
Madaxweynaha Aiyawatt Srivaddhanaprabha, oo loo yaqaan kooxda 'Top' ayaa ka go'an inuu raaco rajada sare ee aabihiis, Vichai, kadib dhimashadiisa naxdinta leh ee ku timid shil helikobtar oo ka dhacay King Power Stadium bishii Oktoobar ee la soo dhaafay.
Aiyawatt ayaa yidhi dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore, “Waxaan doonaynaa inaan horumarino waxkasta oo kooxda ah si naadiga looga dhigo mid waara oo guulo leh. Waxaan had iyo jeer gacan siin doonaa meelaha naadiga u baahan in la xoojiyo, ha ahaato kooxda ciyaarta, garoonka tababarka, garoonka, shaqaalaha iyo kaabayaasha. . Haddii baahida kooxda la aqoonsado oo la aqoonsado karti ku habboon, had iyo jeer waxaan diyaar u nahay inaan taageerno horumarka iyo horumarinnada. "
Shaqaalaysiinta Leicester waxay ahayd mid aan caadi aheyn iyo ka hor. Daafaca dhexe Caglar Soyuncu - oo ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicnaa xilli ciyaareedka ilaa haatan - ayaa lagu shaqaaleysiiyay kaliya wax ka yar 18 milyan ginni xagaagii 2018, isagoo og in Man City, Man United iyo kuwa kale way wareegi lahaayeen. Maguire daaqadda xagaaga 2019. Marka waxay heystaan ​​bedel diyaar ah oo la sameeyay, sidaas darteed waxay iska ilaalinayaan baahida loo qabo inay bixiyaan guuldaradii daafaca ka dhashay qadarka rikoorka ah ee ay ku guuleysteen xiddiga heerka caalami ee Ingariiska.
- O'Hanlon: Dhacdooyinka cajiibka ah ee udhaxeeya Liverpool iyo Man City
Ogden: Isu diyaari ciyaarta ugu weyn xilli ciyaareedka
- Faaniska ESPN: Meel dhig meelaynta!
Lee Congerton, Maamulaha Guud ee Shaqaalaynta, wuxuu xiriir dhow la leeyahay Rodgers oo ku qotoma 2005 markii lammaanuhu ku sugnaayeen Chelsea. Tababaraha Leicester ayaa markaa ahaa maareeyaha kaydka ee Stamford Bridge, halka Congerton uu soo tababaray kooxda da 'yarta ka hor inta uusan Jose Mourinho u dalacsiin jagada madaxa ololaha. Waxay dib ugula midoobeen Celtic kadib seddex sano oo ay ku sugnaayeen Chelsea. Rodgers waxaa loo magacaabay Agaasimaha Shaqaaleysiinta Cayaaraha Welsh ee Parkhead 2016. La yaab maahan, Mr. Congerton wuxuu sidoo kale ku soo biiray Leicester, wuxuu sidoo kale kormeerayaa Callum Smithson iyo Jose Fontes kooxda farsamada indha indheeynta isagoo la shaqeynaya Agaasimaha kubada cagta Rudkin iyo Agaasimaha Fulinta Susan Whelan.
Isagoo amaaney kooxdiisii ​​hore ee cajiibka aheyd iyo akadeemiyadii caanka aheyd, Leicester waxay heshiisyo yar ka gaartay xagaagan. Saxiixa macaamil ganacsi Youri Tielemans waa mid joogto ah oo saxiixeysa rikoor naadi ah oo ah lacag dhan 40 milyan ginni markii Man United ay ogaato inay tahay afgambi iyo xasillooni Ayoze Perez Newcastle United waa dhaqaaq kale oo caqli gal ah. Vardy, bidix, isagoo ciyaaraya kulankii Crystal Palace. Da'da 32, wuxuu ku hogaamiyaa goolasha 10 ee Premier League. Sawirada Plumb / Leicester City FC oo loo maro Getty Images
Sidoo kale, waxay ku fiicnaayeen inay hayaan hantidooda ay jecel yihiin. Gadaal bidix Ben Chilwell da 'da' 22, ayaa waxaa dacweeyay Arsenal iyo Liverpool ka hor inta uusan u hibeynin garoonka dheer ee King Power, halka Man City ay weli isha ku heyso horumarintiisa. Wilfred Ndidi Waxaa tixgelin la siiyay kooxo dhowr ah oo baadi goobaya raadinta qadka dhexe ee daafaca, halka James Maddison ayaa weli si xoogan loola xiriirinayaa Old Trafford. Labada ciyaaryahanba sidoo kale waa sanado 22 waxayna ka mid yihiin kartida ugu fiican horyaalka ee bartamaha beerta.
Jamie Vardy, oo da 'ahaan u ahaa 32 laakiin weli hogaaminaya miiska gooldhalinta horyaalka, wuxuu caan ku ahaa inuu ka fogaado Arsenal ka dib markii ay FWA u magacowday Kubadda Cagta sannadka. Tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda, Rodgers wuxuu ku guuleystey inuu ka soo saaro waxa ugu fiican weeraryahankiisa isagoo waxyar bedelay ciyaartiisa.
Maamulaha ayaa yiri: "Marka hore dhanka daafaca, qasab kuma ahan inuu riixo afarta danbe," ayuu yiri maamulaha. Waa nin maalinle u ordi doona adigu. Hadda waa mid si aad ah looga wada shaqeynayo sida aan u dooneynay inaan isaga cadaadis saarno wuxuuna sameynayaa waxyaabo badan oo gaagaaban oo cadaadis ah, kaasoo uu aad ugu fiican yahay Aad ayuu ugu fiican yahay dejinta dabinnada inuu ku adkaysto inuu kaalin muhiim ah ka ciyaaro aaggan. Ka dib wuxuu inbadan ku ciyaaraa hoolka iyo xarunta. Ragga kale, waa shaqadooda inay fursado u abuuraan isaga iyo kuwa kale, ka dibna weydii inuu sii joogo meesha ugu dambeysa. “Waxa uu ku ciyaaraa dhoola cadeyn runtiina aad ayuu u jecel yahay kubadiisa marwalbana waa muhiim markasta ciyaaryahan ahaan” ayuu yiri Rodgers. Vardy wuxuu dhaliyay sideed gool sideed kulan oo uu ka horyimid Arsenal, oo ay kujirto seddex jajab, adiguna
In kasta oo mustaqbalka Unai Emery aan la hubin oo go’aamada kooxdiisu si joogto ah wax looga weydiinayo - marka loo eego daweynta Mesut Ozil, Granit Xhaka Xilliga xagaaga, bedelkii aad sameyn lahayd difaac is-qarxin kara, bilowga xilli ciyaareedka Leicester wuxuu ka tarjumayaa xulashooyinkooda caqliga leh. Laga soo bilaabo dhisme cusub oo ah Xero Xero Million Pound Training Complex, ilaa dhisidda koox saqaf sare leh, laga soo bilaabo magacaabista Rodgers illaa go’aanka muhiimka ah ee ah inaanu safrin meel fog kahor (80 mayl) marka la barbar dhigo 687 11 ee Arsenal) si si habboon loogu meel mariyo Qorshaha Rodgers, kooxda heysata 654-2015 waxay ka faa'iideysataa qorsheynta codka.
Kuwa ka soo hor jeeda Waqooyiga London dhamaadka todobaadkan waxay ku fiicnaan doonaan inay qoraal ka qaataan.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/english-premier-league/story/3984301/leicester-won-the-title-in-2015-16-but-their-return-to-premier-league-elite-under-brendan-rodgers-is-no-fluke
Klopp ayaa reebay u dhaqaaqista Liverpool ee Mbappe